AGG kuyinto sezizwe ezihlukahlukene Inkampani igxile design, ukukhiqiza nokusatshalaliswa izinhlelo gezi naMandla eziphambili solutions.Backed by ukuphuma Isazi sendawo nomthengisi ukwesekwa, AGG Amandla yiyona abahlinzeki brand emhlabeni wonke ziye ephendukela ngoba omethembayo nokunokwethenjelwa akude ugesi .
Okuhlangabezanwe nakho kwethu ukusebenza imisebenzi emikhulu, ezifana telecoms umkhakha, kuye kwaholela ukuklama eside ukugijima fuel amathangi nge ukuphepha okungeziwe engqondweni.
Sithuthukise ibanga esezingeni 500 futhi 1000 litre amathangi, noma eyodwa noma ngodonga double. Ngoba wonke umuntu unezidingo ezahlukene, uchwepheshe wethu onjiniyela kungaba ngezifiso umnikelo wethu ukuze ahlangabezane nezidingo zakho ngabanye.
Ngokusebenzisa umkhakha ehola zokulawula ukunikela akude zokuxhumana amaphakheji, thina ukukuvumela ukuthi ihlole futhi ilawule imishini yakho evela ehhovisi noma ngenkathi ethutha.
Abaningi control panel amaphakheji manje isici zokusebenza smartphone ukuthi ukunikeza ukufinyelela ngabanye generator isethi nemingcele futhi ukukhiqiza izaziso noma yiziphi izinkinga ku site.Advance ulwazi nenkinga ikuvumela ukuphathisa umthombo ezifanele, ukulondoloza ukuvakashelwa okulahlwayo futhi ekugcineni, imali.